Interview with Meena Subba
"संविधान नबन्ने हो कि भन्ने शंका छ"" जहाँ गए पनि आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता, भाषा र संस्कृतिलाई माया गरौं, आफ्नो संस्कृतिलाई नभुलौं ।" - Meena Subba
मीना सुब्बा एकजना संघर्षशील एवं उदाहरणीय महिलाको नाम हो । धरान नगरपालिकामा स्थायी घर भई सुनसरी जिल्लालाई आफ्नो कार्यथलो बनाएर राजनीति एवं समाज सेवामा क्रियाशील उहाँ हाल नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य एवं नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्यसमेत हुनुहन्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सुनसरी उपाध्यक्ष रहेर चार वर्षदेखि सामाजिक सेवामा समेत संलग्न रहादै आउनुभएकी सुब्बा हाल आएर सभापति पदको प्रत्यासीसमेत बन्नुभएको छ । बगैंचा डटकमसितको कुराकानीमा उहाँ प्रवासमा रहेका नेपालीलाई सन्देश दिँदै भन्नुहुन्छ– "जहाँ गए पनि आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता, भाषा र संस्कृतिलाई माया गरौं, आफ्नो संस्कृतिलाई नभुलौं ।"
० लामो समयदेखि राजनीतिलाई पेशाको रुपमा अपनाएर हिँडिरहनु भएको छ, यस क्षेत्रलाई नै किन रोज्नुभयो ?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
० नेपालमा धेरै राजनीति पार्टीहरू छन् तर यहाँले नेपाली कांग्रेसलाई रोज्नुभयो, किन होला ?
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस धेरै पुरानो इतिहास बोकेको पार्टी हो । अन्य दलमा भन्दा नेपाली कांग्रेसमा नै बढी लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र निष्ठा देखिएकाले मैले कांग्रेसलाई रोजेकी हुँ।
० राजनीतिलाई फोहोरी खेल (डर्टिगेम) भन्ने गरिन्छ, यस भनाइप्रति तपाईको कस्तो धारणा छ र तपाईको नजरमा नेपाली राजनीतिमा कतिको फोहोरी खेल खेलिन्छ ?
राजनीति आफैंमा फोहोरी खेल कदापी होइन । समाज परिवर्तनका लागि राजनीति नभई नहुने एउटा अपरिहार्य अंग हो । तर नेपालमा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार एवं जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएकाले कतिपयलाई राजनीति फोहोरी खेल हो जस्तो लागेको हुनसक्छ । तर, विकृति जहाँ पनि हुन्छ, हामीले नकारात्मक सोचाइमात्रै राख्नु हुँदैन । यस्ता नकारात्मक पक्षलाई हटाउँदै हामीले राजनीतिलाई जनताको पक्षमा उपयोग गर्नुपर्दछ र गर्न सकिन्छ भन्ने ममा विश्वास पनि छ ।
० पितृसत्तात्मक तथा पुरुष प्रधान समाजमा एउटा नारी भएर पनि राजनीतिमा लागिरहनुभएको छ । कतिको अप्ठेरो र भेदभाव भएको महसुश गर्न भएको छ ?
एकदमै । हामी महिला राजनीतिकर्मीहरूलाई नेपाली समाजको पछौटेपन र पितृसत्तात्मक सोचका कारण पछाडि पार्ने प्रयत्न हुने गर्दछ । ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका नेपाली महिलाहरूले नीति निर्माणको तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता पाउन पनि धेरै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
० परिवारबाट कतिको सहयोग र सद्भाव पाउनुभएको छ ?
मैले आफ्नो परिवारबाट त शतप्रतिशत सहयोग र सद्भाव पाएकी छु । शिक्षित परिवारकी नारी भएकीले समाज सेवा र राजनीतिमा मैले परिवारबाट कहिल्यै अवरोध महसुस गर्नु परेको छैन । यो नै मेरो ठूलो उत्साहको स्रोत पनि हो ।
० यस क्षेत्रमा लागेर के पाए र के गुमाएजस्तो लागेको छ ?
यो क्षेत्रमा लागेर मैले पैसा कमाउने कुरा चाँहि गुमाएँ । तर यसक्षेत्रमा लागेपछि मैले इष्टमित्र साथीभाइहरू प्रशस्तै कमाएकी छु । र, सबैसित बोल्ने र व्यवहार गर्न सक्ने आत्मविश्वास कमाएँ ।
० तपाई नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध नेतृ हुनुहुन्छ, नेपाली राजनितिमा अरु पार्टीको दाँजोमा यो पार्टीले निक्कै लामो इतिहास बोकेको मानिन्छ र यो पार्टीले धेरैपटक सत्ता पनि सम्हालिसकेको छ । तर, सही ढंगले सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेर नै देश यो अवस्थामा पुगेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको सुनिन्छ यसप्रति तपाईको कस्तो धारणा छ ?
नेपाली कांग्रेसले सत्ता चलाउन नसकेको चाहिँ होइन तर एकपटक भूइँचालो आइसकेपछि त्यसले बिगारेको ठाउँको मर्मत गर्न गाह्रो भएको मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई । नेपाली कांग्रेसले १०४ वर्षे राणा शासन अन्त्य गर्‍यो, पञ्चायत हटायो, त्यसपछि शसस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई जंगलबाट यता ल्याउँदा कठिनाइ हुनु स्वाभाविक थियो । यी विभिन्न कठिनाइहरूले गर्दा कांग्रेसले जति सोचेको थियो, त्यति गर्न चाँहि नसकेको हो ।
० राणा शासन, पञ्चायत, प्रजातन्त्र हुँदै देश गणतन्त्रमा आइपुगेको छ, नयाँ नेपालको नारा लिएर देश संघीयतामा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्थामा जातीयताको आधारमा संघीय राज्य बनाउने कुरा गहन रुपमा आइरहेको छ र यसको नाममा आन्दोलन पनि भइरहेको छ, तपाईको पार्टीलगायत कतिपय अरु पार्टी र व्यक्तिहरूले यसको विरोध पनि गरेको अवस्था छ, तपाईको व्यक्तिगत विचारमा जातीयताको आधारमा संघीय राज्य स्थापना गर्न उपयुक्त होला या नहोला ?
जातीय आधारमा चाहिँ संघीयता बनाउनु हुँदैन । क्षेत्रीय, भौगोलिक तथा जनसंख्याका आधारमा चाँहि हामीले संघीयतामा जानै पर्दछ । तर जातीय आधारमा चाहिँ म मान्दिन ।
० अहिले देश संक्रमण र अन्यौल परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्थामा छ, तोकिएको समयमा नयाँ संविधान बन्छ भन्ने कुरामा पनि शंका र उपशंका छ, संविधान बनिहाले पनि जनताले चाहेजस्तो बन्छ वा बन्दैन भन्ने कुरामा पनि शंका नै छ, के तोकिएको समयमा जनताले चाहेजस्तो संविधान बन्न सक्ला र नयाँ संविधान बनेपछि देशमा साँच्चै शान्ति छाउला ? कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मलाई पनि कताकता शंका लागिराखेको छ । किनभने नेताहरू कुर्सीका लागिमात्रै तानातान गरिराखेका छन् । गिरिजाबाबु हुनुहन्थ्यो, आज उहाँ नै नरहेका कारणले गर्दा कतै समयमै संविधान नबन्ने पो हो कि भन्ने मलाई कता कता शंकाचाँहि लागिरहेको छ ।
० परिवारको बारेमा कुरा गरौं, कतिको समय दिन भ्याउनु भएको छ आफ्नो परिवारलाई र आफ्नो परिवारबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
परिवारलाई मैले धेरै समय दिन नसकेता पनि परिवारबाट म धेरै नै सन्तुष्ट छु । तर पनि सिनेमा हेर्ने, जाँड रक्सी खाने र गफ गरेर समय नष्ट गर्ने काम मैले नगरेको हुनाले त्यो समय मैले घरमा दिएकी छु र उब्रिएको समयलाई राजनीतिमा लगाएकी छु । यसले गर्दाखेरि सन्तुष्ट छु ।
० बगैंचा डटकमलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद । र, अन्त्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई बगैंचा डटकमको माध्यमबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
मेरा विचारहरूलाई स्वदेश र विदेशमा रहेका पाठकहरूसम्म पुर्‍याउने अवसर दिनुभएकोमा बगैंचा डटकमलाई मेरो पनि धन्यवाद । स्वदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि म राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाऔं भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु । र विदेशमा बसिरहनुभएका नेपाली दाजभाइ दिदी बहिनीहरूलाई पनि आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता, भाषा र संस्कृतिलाई माया गरौं, जहाा गए पनि आफ्नो संस्कतिलाई नभुलौं भन्न चाहन्छु ।
Interviewed by Naresh Sunwar for www.bagaicha.com
Views : 2960 | Date : 2010-04-18
kisan limbu from Nepal says on 28 April 2010
very well said answer and wish you goodluck.
susan from Nepal says on 19 April 2010
amm malai waha ko bichar ek damai sahi ra hami nepali daju bhai didi bahini haru ma ewta rastiya ra aafno sanskrity ani vasa nabhulaw bhanne bichar malai ramro lago... ra hami ma rastiyata ko sudar tarfi pani bichar purawnu parcha vanne kura hami ma hunu parcha..